Iindawo ezilungileyo kakhulu simahla kunye neTemplate yePremiyamu yokuQala | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UManuel Ramirez | | Izibonelelo, itemplates, Ezahlukeneyo
Sikulo nyaka 2020 kwaye siza kugxininisa into entle: sinayo esandleni sethu amakhulu ezixhobo zoncedo zokuqhubeka kwakhona kweetemplate apho sinokuthi sibonakalise iprofayili yethu yobungcali ngeendlela ezilungileyo.
Kwaye nangona singekho elona xesha lilungileyo lokusebenza kweminye imisebenzi, kwabanye abaninzi, njengedijithali, besazi ukukhangela esinokukwenza Sifumanele itemplate yokuqhubeka kwakhona okushiya kubhalwe kakuhle kwaye kuboniswe apho sihamba ngcono kwaye ithini iprofayili yethu yobungcali. Masenze oko ngothotho lwezixhobo zazo zonke iintlobo.
1 Izikhokelo zekharityhulam 24
3 Izikhokelo zepremiyamu zeMicrosoft
4 I-Freepik iqala kwakhona iitemplate
5 Iklasi ye-CM
6 Itemplate yeCV
11 Umsebenzi wokuqala
Izikhokelo zekharityhulam 24
Este Iwebhusayithi iyasivumela ukuba sikhuphele simahla kwaye ngaphandle kokuya kulo naliphi na iphepha lobhaliso, iintlobo ezahlukeneyo zeetemplate ezikumgangatho ophezulu kwingcinga nakoyilo lwabo. Ukusuka kwiphepha leetemplate nganye sinokuzikhuphelela itemplate kwiLizwi kwaye emva koko siyihlele kwaye siyenze ngokwezifiso ukuthanda kwethu kwinkqubo yokuhlela iMicrosoft.
Ukuba awunayo le nkqubo kwiWindows, sicebisa ukuba usebenzisa ezinye zeapps zazo ze-Android kunye ne-iOS kwaye ke uhlele iinkcukacha zakho kwithebhulethi okanye kwiselfowuni. Ngomonde omncinci, unokulungiselela iprofayili yakho yobungcali ngeetemplate zomgangatho zepremiyamu, ezikhoyo nangoko.
Iitemplate zeCV - Kwiwebhu
Kunye noZety ewe sijamelene ne «online resume builder» kwaye apho, enkosi kwinto yokuba ibhalwe ngeSpanish, siya kuba nakho ukuchaza, inyathelo ngenyathelo, icandelo ngalinye elibaluleke kakhulu elichaza iprofayili yethu yobungcali. Le webhusayithi yenziwa kakuhle ukuze ujongano lwayo singaphoswa naliphi na inyathelo elibalulekileyo.
Singakhetha ngaphambi kokuba siqale ngomhleli uhlobo lwekharityhulamu esifuna ukuyisebenzisa ukwenza uyilo lucace. Iprofayili yoyilo ayifani nolawulo. Kwiphaneli esecaleni sinawo onke amacandelo enza itemplate online ukuze ekugqibeleni siyikhuphele. Nangona inxenye yobhaliso lomsebenzisi ingena apha ukuze sishiye iposi kunye nedatha yethu. Ukuba awuziva ngathi uhamba ngeLizwi kwi-app yeselfowuni okanye wenze ngokwezifiso itemplate, lo mhleli okwi-intanethi usebenza kakuhle.
Izikhokelo zepremiyamu zeMicrosoft
Asifuni ukuwutyeshela umgangatho weetemplate zikaMicrosoft zokuqhubeka kwakhona ngeLizwi. Ukuba kunokwenzeka ukuba sinenkonzo kaMicrosoft 365, sineLizwi kwaye oku kuthetha ukuba sineendidi ngeendidi zoluhlu lweetemplate esizikhuphele simahla; Kusengqiqweni ukuba sijamelene nenkonzo yonyaka yobhaliso engadluli kwi-100 euros, ke ngoko sinokusebenzisa ukugcinwa kwayo kwilifu nakwiofisi yayo ukuze ibe nesisombululo esikhethekileyo.
Ukusuka kwa eli Lizwi linye sinokufikelela kwezo templates ukukhuphela ikharityhulam kwaye uyihlele kwinkqubo yakho yokuhlela isicatshulwa. Olunye uhlobo lokuhlawula olunokufika xa ufuna olunye uhlobo lwenqanaba; okanye ubuze nje osebenza naye kuWhatsApp ukuba bayafikelela na kule nkqubo ukuze bakwazi ukukuvumela ukuba uyisebenzise.
Izikhokelo zeOfisi - web
I-Freepik iqala kwakhona iitemplate
Njengoko singabuyi neFreepik, njengantoni Senze usuku oludlulileyo ngeetemplate zePowerpoint, kwaye nantsi sinokufikelela kwifayile ye- Zininzi zeetemplate zasimahla nezisemgangathweni Ukutshintsha nje izicatshulwa kwaye kwimizuzu embalwa ube neprofayili elungileyo elungiselelwe.
Singayenza icace ukuba iFreepik iyaqhubeka nanamhlanje yenye yeziza kwezixhobo zasimahla, kunye neprimiyamu, yomgangatho ongcono kuyo yonke imbonakalo yayo. Ungaphoswa ngumxholo njengoko unika zonke iindlela ezinomonde omncinci kunye nokwazi ukukhangela. Sele sibeke ikhonkco kwiitemplate zekharityhulamu.
I-Freepik iqala kwakhona iitemplate - Kwiwebhu
Un indawo yokufunda kunye nesikolo sentengiso yedijithali kwaye kwelinye lamanqaku akhe safumana uluhlu lweetemplate ezikumgangatho ophezulu zasimahla. Singancamathisela amakhonkco apha, kodwa siyakukhuthaza ukuba undwendwele esi sithuba kwaye, ngasendleleni, wazi ezinye zeentlobo ezaziwa kakhulu zekharityhulamu yenkcazo kwinkcazo enkulu.
Al Ukuphela kwenqaku kwi-Aula CM uya kufumana amakhonkco kwiGoogle Drayivu Ukusuka apho unokuzikhuphela khona kwaye ngenxa yoko kwiselfowuni okanye kwikhompyuter yakho itemplate enkulu yaloo profayile yobuchwephesha uyiqambayo, nokuba kukukhangela umsebenzi wokuqala okanye kukhangelo olusebenzayo ukuphucula olukhoyo emva kohlolisiso olwenziwe eKapa .
Igumbi lokufundela CM - web
Iklasi yeklasi ye-CM yomzekelo weklasikhi - Google Drive
Sadlula iwebhusayithi yokwakha i-intanethi yesiNgesi, kodwa sibeka njengenye indlela eseleyo. Sikhetha ngokulula uyilo lweetemplate kwaye siqale ukuhlela intsimi nganye kusetyenziswa ujongano lwale webhusayithi ikwi-Intanethi.
Ukusuka kumava alulaLogama uthetha isiNgesi, unokukhetha umbala ngokwezifiso itemplate kwaye uyakhe emva koko nawo onke amabakala apho ubonakalisa khona amava akho. Iwebhusayithi enomdla ngenxa yendlela eyenziwe ngayo, nangona ingayeki ukucela idatha yakho kwiphepha lokubhalisa. Ewe ayikubuzi nayiphi na i-euro ukubuya, ke siyacebisa njengomakhi wetemplate kwi-Intanethi kwiprofayile yakho yobungcali.
Itemplate yeCV - web
Okunye iwebhusayithi ngesiNgesi esivumela ukuba sakhe ikharityhulam yethu ngothotho lwamanyathelo abonisiweyo kuthi. Ewe kufuneka ubhalise ukuze ukwazi ukuqhubela phambili kwaye ke ubhale ikharityhulam yakho kumava akho.
Uqhayisa ngelokuba iikharityhulam bezisemthethweni ngenisa icandelo lobungcali kwiinkampani ezinkulu. Ukuba sijonga umgangatho wabo, inyani kukuba abakho mbi kwaphela kwaye ziitemplate ezicocekileyo kuyilo olugxininisa ubuncinci, nangona imibala isilela. Ngaphezulu kwe-20 zokuqhubeka kwakhona kweetemplate ezilungileyo kwaye ezikuvumela ukuba ufikelele kwilizwe lobuchwephesha ngendlela elula nesebenzayo.
IBuzzCV - web
La Ivenkile ethandwayo yazo zonke iintlobo zomxholo owenziwe ngabadali ngokwabo eziya kwiprofayile yakho ukuyokuthengisa, ikwabonelela ngamakhulu eetemplate okanye uphinde uqalele itemplate. Sibeka eli khonkco ngenxa yokuba, nangona iitemplate zingasimahla, zikwinqanaba elaneleyo lokuzahlula kwabanye.
Sele uyazi ukuba xa ufuna umsebenzi kuya kufuneka uyazi ukwahlula kwabanye, kwaye ubhale ikharityhulam eyahlukileyo kuyilo, ukucoca amacandelo okanye ukwakheka ngaphandle kobunzima, kunokuba yinto ephambili ukuze sibonakale phambi kwabanye. Iitemplate esinazo ku-Etsy, abathengisi abathengisayo, Zimalunga nee-euro ezingama-7, ke ukuba ufuna ukwahlula ngokwakho, inokuba lolunye uhlobo olukhulu; ngakumbi ukuba ufuna ukuchitha ixesha elininzi ugcwalisa ikharityhulamu endaweni yokwenza uyilo kunye nokunye.
Iitemplate zokuqhubeka kwakhona kwe-Etsy - web
Sikwi Indawo ye-Envato, indawo yentengiso yemixholo, itemplate kunye neeplagi zayo yonke into Uhlobo lweCMS ithandwa kakhulu kwaye inekhonkco lokukhuphela iitemplate ezingama-20 eziqala kwakhona esingafuni kuzishiya. Unazo ezifumaneka simahla kwaye zichaza nganye nganye ukuze uzikhuphele ngaphandle kokuzibophelela.
Ngamnye enye yeetemplate ezingama-20 zikumgangatho ophezulu, ke kufuneka sikhethe ukuba loluphi uhlobo lwesitayile, umbala kunye nemilo esifuna ukuyinika ubukho ngakumbi kwiprofayili yethu yobungcali. Indawo eyaziwayo nedumileyo yokufikelela kwiitemplate ukuze uzahlule kwabanye.
Iitemplate zeTutsplus - web
La Infojobs iqonga lokukhangela umsebenzi lisivumela ukuba sifikelele kwiitemplate ezili-15 yekharityhulamu yokufikelela kwimarike yomsebenzi ngendlela ebalaseleyo. Ukuba le ndawo inikezelwe kwingqesho eSpain sele ichaza kakuhle umgangatho weetemplate zayo kunye nendlela eziza kusinceda ngayo ngokugqibeleleyo kwimishini yethu.
Las Kukho zonke iintlobo kwaye zenzelwe intengiso yaseSpain yengqesho, ngenxa yoko siphantse sabenza babalaseleyo kolu ngcelele lweewebhusayithi ukukhuphela iitemplate zomgangatho wokuqhubeka. Ngoku lixesha lokufumana umsebenzi nge-portal yakho.
I-Infojobs iqala kwakhona iitemplate - web
Este Indawo yokuqala yaseSpain yomsebenzi isinika ukufikelela kolunye uthotho lweetemplate okanye iitemplate ezingabalulekanga kwaye sicebisa njengangaphambili kwi-Infojobs. Elula, kodwa esebenzayo, ijolise kwintengiso yabasebenzi kwilizwe lethu, ke ungaphoswa nayiphina yazo ukuze wenze ukhuphelo lwefayile yeLizwi ngendlela othanda ngayo kwaye uyenze icace indlela ofuna ukuwukhangela ngayo umsebenzi.
Umsebenzi wokuqala - web
Sigqibile olu luhlu lweewebhusayithi zetemplate zokuqhubeka kwakhona ngo-Canva, enye yeengcali koku zokubonelela ngesiqulatho somgangatho ophezulu esivela kwi-Intanethi kwaye esinomakhi weetemplate; esisesona sinokusisebenzisa kwezinye iintlobo zemisebenzi enjengawe sifundisile kwamanye amanqaku apha kwi-Intanethi kwi-Intanethi.
I-Canva iqhubeke kwakhona neetemplate - web
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Qalisa kwakhona iitemplate zokukhuphela kwaye uziveze ngendlela engazange ibonwe kwinqanaba lobuchule